Dukaammo badan oo Apple ah ayaa ka dhammaaday keydka 21,5-inji iMac | Waxaan ka socdaa mac
Talaadada soo socota waxaan leenahay cusub evento dalwaddii Apple. Tan iyo bishii Nofembar, Mac mini iyo dhowr MacBook oo ah xilligii cusbaa ee Apple Silicon ayaa suuqa ku jiray. Waxa keliya ee ka dhiman dhammaystirka buugga ayaa ah desktop-ka Mac oo leh processor-ka M1. Haddana, Apple Stores-ka ayaa ka dhammaaday 21,5-inji iMac ah.
Marka ma qaadaneyso Ming-Chi Kuo si loo xiro darafyadan, iyo in la saadaaliyo suurtagalnimada sare ee saxda ah ee Federighi ama mid ka mid ah asxaabtiisa ay na tusi doonaan Abriil 20, ka dib toddobada galabnimo waqtiga Isbaanishka, iMac cusub oo wata processor ARM.
Dhammaan xulashooyinka kala duwan ee loogu talagalay 21,5-inji iMac waxay la kulmayaan hoos u dhac helitaanka Dukaammada Apple-ka ee adduunka oo dhan, oo leh taariikheyn bixinta ee amarada khadka tooska ah ee xulashada aasaasiga ah in ka badan toddobaad.
Inta badan dukaamada Apple hadda waxay leeyihiin Heerka 21,5-inch iMac maadaama aan loo heli karin iibsasho degdeg ah. Qaabeynta dhamaadka-sare leh 16GB RAM iyo 1TB ee keydinta Fusion Drive-ka hadda lama heli karo si deg deg ah looga soo qaado, waqtiyo yar oo hoggaamineed ah. Iyadoo aan loo eegin qaabeynta, Apple waxay leedahay shan illaa toddobo maalmood oo ganacsi dukaan qaadis. Tan macnaheedu waxa weeye in aanay iyagu kayd ahaan ugu haynin dukaammada.
21,5-inji sare oo ah 'iMac' oo leh muuqaal 4K ah ayaa sidoo kale la kulma la'aanta helitaanka dukaamada qaarkood; si kastaba ha noqotee, inta badan Apple Stores waxay ku sii jirtaa keyd. Ugu weyn 27-inch iMac wali la heli karo sida caadiga ah, iyada oo aan wax dhibaato ah ku jirin qaabeyn kasta.
Bishii hore mar hore waan ogeysiinay tufaaxaas ayaa lahaa joojiyay laba qaabeyn oo ah heerka 21,5-inch iMac. Apple waxaa lagu xantaa inuu ka shaqeynayo nashqad cusub oo ah 21,5 ama 24-inch "yar" iMac ah si loo ballaariyo waxa loo yaqaan 'Apple Silicon', laakiin in Talaadada la soo bandhigi doono lama oga. Wax walba waxay muujinayaan inay tahay.
Toddobaadka soo socda, Talaadada Abriil 20, Apple waxay qaban doontaa munaasabaddeeda "Spring Loaded" halkaasoo la filayo in lagu shaaciyo iPad-ka cusub.Hase yeeshee, waa la arki doonaa haddii iMac-ka cusub ee wata processor-ka M1 uu diyaar u yahay in la soo bandhigo. Talaadada waxaan ka tagi doonaa shaki.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Dukaammo badan oo Apple ah ayaa ka maqnaa 21,5-inji iMac